Archive du 20200417
BIANCO Hijery akaiky ireo famatsiam-bola azo
Mahazo laka ny fanodikodinana ireo harena voajanahary amin` izao krizy ara-pahasalamana izao.
Tantsambo mihitsoka any an-dafy "Avelao hody an-tanindrazana izahay"
Tantsambo Malagasy maro, miasa amin’ireo sambo an’ny kaompania MSC (Mediterranean Shipping Company)
Famonjana mpanao gazety Manaratsy endrika tanteraka an'i Madagasikara
Efa malaza maneran-tany ity raharaha famonjana mpanao gazety eto Madagasikara ity. Maro ny maneho ny ahiahiny, fa tena voatohintohina tanteraka ny fahalalahana maneho hevitra.
Trafikana hazo Bolabolana voamboana 60 tao anaty lakana
Hazo voamboana 60 isa saika havoaka an-tsokosoko tao Mahajanga no tratra tany an-toerana ny talata 14 aprily teo rehefa nianga tao Antsahabingo.
Mpilalaon'ny Makis de Madagascar Nahazo fanampiana ihany koa
Manoloana ny trangan-javatra misy eto amin’ny firenena sy manerana an'izao tontolo izao amin’izao fiparitahan’ny valananaretina COVID-19
Loza teny Tsarasaotra Nitolo-batana ilay mpamily nahafaty olona
Lehilahy iray nitaingina bisikileta no maty tsy tra-drano teny amin’ny lalam-baovao Tsarasaotra mivoaka an’Ivato omaly maraina tokony ho tamin’ny 9ora.
Fenitra ara-pahasalamana Faha-86 maneran-tany i Madagasikara
Laharana faha-86 maneran-tany sy faha-7 aty Afrika i Madagasikara amin’ny mari-pandrefesana ny filaminana ara-pahasalamana maneran-tany na ny GHS ho an’ny taona 2019. Isa 40,6 no azon’ny firenena Malagasy.
Eoropa Mbola nofinofy ny fahafehezana ny aretina
140 902 no maty raha kely indrindra, ary 2 125 041 kosa no olona voa maneran-tany, izay firenena 193 no efa misy ny coronavirus. 92 000 mahery ny maty tany Eoropa izay 65% amin’ny maneran-tany.
Antananarivo Taxi 7 000 sy taxi-be 5 000 no efa nahazo fanampiana
Namoaka tarehimarika ny fiadidian’ny tanànan’Antananarivo mikasika ny fizarana fanampiana ho an’ireo mpitondra fiarakaretsaka na taxi sy ny taxi-be.
Zokiolona haka "pension" Tsy mila fahazoa-dalana manokana
Manomboka amin'ity anio ity ny fandoavana ny vola fisotroan-dronono ho an'ireo zokiolona manerana ny nosy.
Mpiasan'ny zone franche Mbola maro ireo mamono tena miasa
Mandeha an-tongotra avy any Tanjombato ny sasany hiasa any Andraharo. Miala ao an-trano amin ny 4ora 30mn maraina.
Epicerie Misy miverina misokatra amin'ny hariva
Tahaka ny antso an-tany efitra ihany ny nataon'ny ministeran'ny atitany hatrizay satria tsy voahaja amin'ny ampahany betsaka ny fepetra amin'ny fihibohana, indrindra fa amin'ireo kaominina sy fokontany ivelan'Antananarivo renivohitra.
Tompon'andraikitry ny fokontany Maro no miraviravy tanana
Asa na variana amin'ilay fanisam-bahoaka omena ny Vatsy tsinjo na ahoana fa dia maro ireo tompon'andraikitra eny amin'ny fokontany no tsy mahavita mampanaja ny lalàna.
Olona matin'ny Coronavirus Tsy mpifoka sigara ny ankamaroany
Resy lahatra tanteraka amin’ny fahombiazan’ny hevoka na kininim-potsy io na ravintsara na ravim-boasary sy ny hafa ny dokotera Toubib Jaures Churchill, mba hiadiana amin’ny aretina Coronavirus.
Fanadihadiana momba ireo marary Maro no mbola tsy afa-po
Mitotaly 33 ny isan’ny marary voan'ny Coronavirus ka sitrana eto Madagasikara hatramin’izao.
Ady atao amin'ny Covid-19 any Toliara Notolorana fanampiana ireo mpianatry ny Oniversite
Miaradia sy miray hina ireo mpitondra fanjakana any Toliara ka tamin'ny alarobia 15 aprily 2020 teo izy ireo dia nanatanteraka